Fizarana amin'ny mpamaky eReader rehetra
Todo eReaders no bilaogin'ireo mihinana boky izay, ankoatry ny taratasy, te-hamaky azy ireo amin'ny fitaovana elektronika ihany koa. Ny fampahalalana izay ho hitanao ato amin'ity bilaogy ity dia manomboka amin'ny boky ka hatramin'ny fitaovana mamaky azy ireo, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko izay ahafahanao mamadika lahatsoratra ho endrika mifanaraka amin'ny eReader.
Amin'ny eReaders rehetra dia miresaka momba ny mpanamboatra tsara indrindra an'ity karazana fitaovana ity koa izahay, izay hanampy anao hanapa-kevitra hoe iza no mety indrindra amin'ny zavatra ilainao. Etsy ankilany, ho hitanao ihany koa ny fampahalalana mifandraika amin'ny karazana fitaovana hafa, toy ny kojakoja, takelaka na fanovana azonao atao amin'ny eReader izay efa anananao.
Saingy tsy ho feno ity bilaogy ity raha tsy misy ny vaovao ankehitriny, izay ahitanao ireo famoahana, vaovao momba ireo mpanoratra sy haisoratra amin'ny ankapobeny. Manana ny fizarana rehetra eto ambany ianao. NY ekipa fanonta tompon'andraikitra dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana azy ireo havaozina mba ho vaovao hatrany ianao.